Tiri Duckula | Casino UK
Duckula waa mid ka mid ah Bixi by Credit Phone naadi ku saabsan vampires iyo ghouls. Tani Afyare online ku salaysan yahay cartoon ah oo caan ah oo ka soo daahay 1980 ee horyaalka la mid ah. Talaabsan ayaa version a Afyare mobile ciyaartoyda in si joogto ah waa ku biiro. Read dib u eegis hoose si aad wax badan ka ogaatid.
Sahlaansashada Pay Tani by naadi Phone Credit
Afyare Tani mobile waxaa loogu talagalay si ay u bixiyaan khamaara online la degree qaar ka mid ah sahlanaato. Waxaad ciyaari karo ka qalab kasta oo mobile heli karaa. Ciyaartoyda la macruufka iyo Android OS this ciyaari kara Bixi by Credit Phone naadi.
Dhigashada la sameeyey iyadoo la isticmaalayo credits phone aad kaliya. Si kastaba ha ahaatee, aadan ka bixi karo iyada oo loo marayo hab this. Iyadoo habkan aad samayn kartaa kayd degdeg ah. Looma baahna samaynta lacagta naqdiga ama isticmaalaya kaararka deynta / debit.
Fahamka Tani Slot Mobile Duckula
Afyare waxa uu leeyahay 40 paylines go'an, 5 duntu iyo 3 saf. Haddii aad tahay qof aqoon u leh cartoon ah, markaas hubaal waxaad ka Garataa doonaa goobta la tixraacayo. Waxaad leedahay qalcaddii la gaadhay waynida in uu yahay meel fog ka mid ah xabaalo a cabsi iska. duntu waa la Taalladaas in ku dul cawska qabuuraha.
Waxaad ka heli kaararka calaamadaha joogtada ah ee A, J, K, S, 9 iyo 10 in this Bixi by Credit Phone naadi. calaamadaha kale waxaa ka mid qalcaddii waynida, shulug hubka, fiidmeerta a, saacad ah iyo xubin weyn.
Features Bonus In Pay Tani by naadi Phone Credit
Waa in aad ogaato in aad leedahay calaamad Wild iyo Bonus in booska this. Wild waa saamiga ah ee Heart icon halka aad leedahay cartoon ah astaanta bonus. The wareeg bonus in kulan ee booska waxaa firfircoonaan by jilayaasha ugu waaweyn ee cartoon ah. Waxaa ka mid ah duck Dadqalato ah, addoonkiisa magacaabay Igor iyo nanny magacaabay sikale. Tilmaamo bonus waxaa kiciyay markii characters kuwaas muuqan ag duntu sida aad la ciyaareyso this Afyare online.
The saddex wareeg bonus yihiin:
A Dadqalato Duck Wild: Duck Dadqalato The dhaqmo sida duurjoogta ah guud ahaan duntu ku.
An maqan Igor Astaanta wareega: Halkan Igor meelaha walxood qurub sixir on duntu in la beddelo si ay calaamadaha tallaabadaas.
Sikale A 3×3 Waaaweyn feature bonus Wilds: Sikale meelaha wilds on saddex saf oo saddex duntu ka waqti isku mid ah.
bixinta credit phone waa wax weyn in this Afyare xiiso leh. Waa hab ka fudud oo ka aamin in la sameeyo kayd. Si kastaba ha ahaatee, Afyare this yimaado iyadoo wax yar ka niyad jab 93.35% RTP.
Doofaar Wizard The
Casino Review UK Live goobta ay ku khamaarayaan iyo gunooyinka Mobile!
Master Of maqan